Vaovao - 8 martsa 2017 Bestway oilfield Inc.
Miarahaba antsika Mr.Gus.Dwairy, lehiben'ny BESTWAY OILFIELD INC., Etazonia, nitarika delegasiona iray hitsidika ny CEPAI.
Tamin'ny 8 martsa 2017, ny lehiben'ny BESTWAY OILFIELD INC., AndriamatoaGus Dwairy, AndriamatoaRonny.Dwairy ary Andriamatoa Li Lianggen dia tonga tany Cepai mba hanao fitsidihana sy famotorana hiresahana ny filaharan'ny vokatra milina solika amin'ny 2017.
Tamin'ny taona 2017, namelana ny indostrian'ny milina solika rehetra. Taorian'ny Fetin'ny Taom-baovao Sinoa dia nitombo ny isan'ny kaomandin'ny vokatra eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny orinasanay dia nampitombo ny ezaka fandraisana mpiasa ary nanangona mpandraharaha teknika marobe famokarana, izay nametraka fototra mafy orina ho an'ny kalitao sy ny hamaroan'ny fandefasana baiko amin'ny 2017.
Ny Bestway Oilfield Inc. any Etazonia dia nanao fanaraha-maso henjana momba ny famokarana, ny fanandramana, ny fitaovana fampiroboroboana ary ny tontolon'ny famokarana ny orinasa. Nankasitraka fatratra ny fahaizan'ny orinasa mpamokatra sy ny haavon'ny fitantanana izy ireo. Naneho ny fatokisany ireo vokatra nomen'i Cepai izy ireo, ary vonona ny hanafatra baiko bebe kokoa amin'i Cepai izy ireo.
Izahay dia tapa-kevitra ny hanao ezaka bebe kokoa amin'ny 2017 ary hanao ny varotra hitombo avo vaovao!